एक भारतीय ट्याग गरिएको "प्रचलन" को समाचार ब्लग - THE INDIAN FACE
4 महिलाहरु को लागी सनग्लास २०२२ तपाइँ याद गर्न चाहनुहुन्न
अक्टोबर 05, 2021
को चार फरक शैलीहरु महिलाहरु को लागी धूप का चश्मा कि तपाइँको शैली र व्यक्तित्व को परिभाषित गर्दछ, अग्रणी हुन। बहुमुखी, ताजा र प्रकाश: हामी तपाइँलाई 'सोमा, Southcal, लोम्बार्ड र लागुना', जुन तपाइँ आफ्नो कोठरी मा राख्न मनपर्छ प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं। यसको अतिरिक्त, उनीहरु एक सहायक बनेका छन् कि पनी सबैभन्दा प्रसिद्ध प्रभावशाली व्यक्तिहरु याद गर्दैनन्। के तपाइँ यसलाई याद गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
हामीलाई थाहा छ कि धूप चश्माहरू छनौट गर्न सुरुमा कति गाह्रो हुन्छ जुन तपाइँको उत्तम सूटमा छ अनुहार र तपाईंको व्यक्तित्व। यही कारणले गर्दा आज हामीले तीन आधारभूत नियमहरूको साथ मार्गनिर्देशन बनायौं, प्रत्येक चोटि तपाईंलाई आफ्नो खरीद गर्न जानुहोस् धूपको चश्मा। के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ यो के हो? हामीलाई पढ्नुहोस् किनकि भित्र The Indian Face हामीसँग ती चश्माहरू छन् जुन तपाईले यति खोजिरहनु भएको थियो।
बेसबल क्याप्सको ईतिहासले जन्मको जन्मको लागि नेतृत्व गरेको छ ...
र तपाईं, केको लागि जन्मनुभएको थियो? हामी सबैको उद्देश्य छ। हामी तपाईंलाई हाम्रो कुरा भन्छौं: हामी स्वतन्त्रता, साहस र खेलको आनन्द लिन जन्मिएका छौं। यही कारणले गर्दा, आज हाम्रो लेखमा, हामी तपाईंलाई यसको कथा बताउँछौं बेसबल टोपी, र यसले कसरी तपाईंलाई संग्रह ल्याउनको लागि प्रेरित गर्‍यो "जन्म ..." de The Indian Face.
इतिहास परिवर्तन गर्ने अन्वेषकहरूलाई चश्मा सम्मान गर्दै: फ्रन्टियर
र तपाईका लागि किन सिमाना छ? हाम्रो लागि उनीहरूले अज्ञातलाई पार गर्ने मूल्यमा प्रतिनिधित्व गर्दछन्, अन्वेषण गर्न र नयाँ जीवित पार्ने साहसको साहसिक। त्यसकारण, आज हाम्रो लेखमा हामी तपाईंलाई यो भन्न चाहन्छौं कि कसले हामीलाई हाम्रो संग्रह बनाउनको लागि प्रेरित गरे फ्रन्टियर, इतिहासको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने 8 अन्वेषकहरूको सूचीको साथ।
तपाईंको प्राथमिकता अनुसार प्याडल सर्फिंग अभ्यास गर्न इन्फ्लाटेबल बोर्डहरू
जुन 25, 2021
के तपाइँ यस संसारमा सुरू गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ? प्याडल सर्फ? वा हुनसक्छ, तपाईं एक विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र सान्त्वना र बहुमुखी प्रतिभाको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईंको उत्तर जे भए पनि, आज हाम्रो लेखमा हामी तपाईंलाई inflatable बोर्डहरूको फाइदा देखाउन चाहन्छौं HIS P,साथै फाइदाहरू पनि यस समुद्री खेलका सबै प्रेमीहरूको लागि।
१० चीजहरू जुन तपाईंले क्याप लगाउन आवश्यक पर्दछ
जुन 22, 2021
के तपाइँ एक क्याप चाहानुहुन्छ, तर तपाइँसँग अझै यसको केही गुणहरू, यसको सामग्रीहरू, यदि यो फिट हुन्छ वा हुँदैन, कसरी यसलाई सफा गर्ने सम्बन्धमा केही शंकाहरू छन्? आज हाम्रो लेखमा हामीले तपाईका सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिन र तपाईलाई छनौट गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रस्ताव राखेका छौं।
साहसी आमाहरूका लागि शीर्ष उपहार
सबै बच्चाहरूका लागि जोसँग साहसी र साहसी आमाहरू छन्: यो तपाईंको पोष्ट हो। हामी तपाईंलाई योजनाहरू र अनुभवहरूमा ideas विचारहरू प्रस्ताव गर्दछौं जसले तपाईंको आमाहरूलाई तपाईंको लागि पिघलाउँदछ र दिनको पूर्ण आनन्द लिन्छ। फाइदा लिनुहोस् र लेख्नुहोस्, किनकि मातृ दिवस आउँदैछ।
रातो लेन्सको साथ धूप चश्मा लगाउने फाइदाहरू
सनग्लासको नयाँ जोडी खोज्दै गर्दा यो राम्रो मौसमको शुरुआतसँग पर्यायवाची छ र सहि छनौट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। रातो चश्मा फेसनमा छ र धेरै फाइदाहरू छन्। यहाँ फेला पार्नुहोस्!
शीर्ष बुबाको दिनको लागि5उपहार स्टाइलिटी खेलकुद फेसन!
अझै बाबाको दिन के दिने भनेर सोचिरहनु भएको छैन? यो समय फरक र मूल केहि शर्त गर्न को लागी हो। यस बुबाको दिनमा, गर्नतपाइँको उपहारहरूमा त्यो विशेष स्पर्श थप्नुहोस् र तपाइँको खेलकूद र आकस्मिक-मायालु बुबाले सबै प्रशंसाको योग्य देखाउनुहोस्। हामी तपाईंलाई फादर्स डेमा दिनका लागि best उत्तम उपहारहरू प्रदान गर्दछौं।
पुन: संकलित! तपाईको हरियो सनग्लासलाई कसरी संयोजन गर्ने पत्ता लगाउनुहोस् एउटा अविश्वसनीय विकल्प!
हरियो मा छ! हाम्रो सनग्लासहरू लगाउन यो सधैं राम्रो समय हुन्छ। हरियो रंग, जसले प्राकृतिकता, स्वतन्त्रता र जीवनशैली प्रकट गर्दछ, उत्तम विकल्पहरू मध्ये एक हो! In The Indian Face हामी तपाइँलाई तपाइँको हरियो सनग्लासहरू कसरी संयोजन गर्ने भनेर बताउन चाहन्छौं र यदि तपाइँ चहकिलो रंगमा शर्त लगाउन चाहानुहुन्छ भने ती उत्तम विकल्प किन हुन्!
धूपको चश्मा polarयुनिसेक्स उसको लागि र उनको लागि!
धूपको चश्मा यस्तो चीज हो जुन उनी र उनीमा राम्रो देखिन्छ। यो बिन्दुमा अब यो दोहोर्‍याउन आवश्यक छैन कि तिनीहरू फेसनल पूरक भन्दा धेरै बढि छन्, तर त्यसले हाम्रो आँखा सुरक्षित राख्न मद्दत गर्दछ। पछि The Indian Face हामी तपाईंलाई भन्न चाहन्छौं किन सनग्लासहरू छनौट गर्नुहोस् polarफहराइनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ!
२०२० मा सब भन्दा राम्रो सनग्लास र ट्रक क्याप!
हामीलाई थाहा छ कि यस वर्ष २०२० अलि असामान्य भएको छ। तथापि, पछि The Indian Faceर, हामी खराब संग एक्लै छोड्ने छैनौं। यो २०२० जोखिमहरू लिने, साना चीजहरूमा खुशी हुने बर्ष पनि भएको छ। हामी तपाईंलाई उत्तम गुण उत्पादनहरू प्रस्ताव गर्न जारी राख्न चाहन्छौं जुन तपाईं शर्त बनाउन चाहानुहुन्छ! यस कारणका लागि: यहाँ यस २०२० को तारा उत्पादनहरू छन्!
राजाहरू आउँदैछन्! शीर्ष २० विकल्पहरू यस २०२१ लाई दिन
डिसेम्बर 26, 2020
राजाहरू आउँदैछन्! यहाँ हामी तपाइँलाई तपाइँको उपहार देखाउन को लागी समाधान ल्याउँछौं र पूर्ण रूपमा किंग्स मनाउन। यस शीर्ष gift उपहार विकल्पहरू जाँच गर्नुहोस् जुन कहिले असफल हुँदैन र यसले निश्चित कसैलाई खुशी पार्नेछ!
सनग्लासहरू जुन २०२१ मा फेसनमा हुनेछ!
यस २०२१ अप्टिकल फेसनका प्रवृत्तिहरू पहिले भन्दा अझ कूलर छ, शान्त र colorsहरू देखि चम्किला रंगहरू वास्तवमै असाधारण आकारहरूमा यी सन २०२१ को प्रख्यात चश्माहरू जुन तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ!
भारतीय आत्माहरूको लागि फेसन तपाईंको ट्रकरर टोपी तपाईंको लागि बोल्दछ!
डिसेम्बर 20, 2020
तपाईंको क्यापले तपाईंलाई परिभाषित गर्दछ किनकि तपाईं हो र चरित्र तपाईं भित्र बोक्नुहुन्छ। यो फेसन हो, यो हो The Indian FaceSports खेलबाट प्रेरित जुन हामीलाई एक ब्रान्ड र दर्शनको रूपमा पहिचान गर्दछ। हामी कुनै पनि खेलको अभ्यास गर्न जन्मेका छौं जसले हामीलाई अझ राम्रो महसुस गराउँछ, राम्रो मुडमा। यदि केहि बाँच्न भन्दा राम्रो छ, यो भावना, उत्कटता र तीव्रता संग बाँच्न सक्षम भइरहेको छ।
हाम्रो #IndianSpirits प्रत्येक हप्ता सत्र!
हाम्रो भारतीय दल बढ्दो रहन्छ र तपाइँलाई सबै भन्दा राम्रो थाहा छ? हामी तपाइँमा पनि भरोसा गर्न चाहन्छौं! यदि खेल, स्वतन्त्रता, रमाईलो गर्ने इच्छा र साहसिक दिनको दिन तपाईंको दिनको हिस्सा हो भने, हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् र चाँडै आउँदैछ कि राम्रो र सुपर चाखलाग्दो सबै कुराको लागि तयार छ कि यो महान टीमको हिस्सा बन्नुहोस्।
हिउँ चश्मा २०२० यस स्की मौसममा तपाईंको मास्कको नवीकरण गर्नुहोस्!
लगभग "जादुई" स्पर्श नगरी स्की वा स्नोबोर्ड असम्भव छ हिउँ चश्मा उनीहरूले दिए सवारहरू त्यो स्की मौसम २०२० गार्डबाट तपाईंलाई पक्रन छैन! त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् जुन हामीले सँधै हाम्रो हिउँ चश्मा लगाउनु पर्दछ किन कि वर्षको समयलाई ध्यान दिएर। पढ्नुहोस् र यसको कारण पत्ता लगाउनुहोस् स्की चश्माहरू हुन् पर्छ!
सनग्लास २०२० मा प्रचलनहरू खोज्नुहोस्!
केहि राम्रो gafas de sol यदि त्योफरक पार्न सक्छ ... र यस वर्ष gafas de sol पहिले भन्दा धेरै फेसनशील छन्! हामीलाई बचाउनुहोस् कम सौर्य विकिरण र हाम्रो शैली र व्यक्तित्व व्यक्त गर्दा हामीलाई अचम्मको बनाउनुहोस्। के तपाईंलाई थाहा छ यस बर्ष कुन सनग्लास छनौट गर्ने? Dफेसन, शैली र आँखा स्वास्थ्य मा ताजा प्रवृत्ति पत्ता लगाउनुहोस् सनग्लास २०२० मा!
ट्रक टोपी ट्रक ह्याट किन यति लोकप्रिय छ?
को ट्रक क्याप्स o ट्रक क्याप्स उनीहरू हालसालैका वर्षहरूमा लोकप्रिय भएका छन् र हामी यो एथलीटहरू, साहसी व्यक्तिहरू र विश्वभरका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको बीचमा अधिक देख्दछौं। तर हामी मद्दत गर्न सक्दैनौं तर अचम्ममा के यसले क्याप बनाउँछ यती लोकप्रिय ट्रक? तपाईको सुविधा र सुविधा? यसको विविधता र अद्वितीय शैली? पत्ता लगाउनुहोस् कि5कारणहरू ट्रक टोपी बाँकी भन्दा यति फरक!
निजीकृत टोपी तपाईंको शैली र व्यक्तित्व देखाउनुहोस्!
उत्तम शैलीको साथ सूर्यबाट आफूलाई जोगाउन अरू कुनै राम्रो कुरा छैन! याद गर्नुहोस् कि कस्टम क्याप यो उपयोगिता र व्यक्तित्वको उत्तम संयोजन पछि प्राप्त भयो। पढ्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् किन क्याप्सले साँचो एथलिट प्रतिनिधित्व गर्दछ कि तपाईं हुनुहुन्छ, र तपाईंको सबै जोश र व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित।
टोपी लगाएको केटी कस्तो राम्रो देखिन्छ! २०२० मा सब भन्दा फैशनेबल ट्रेन्डहरू जान्नुहोस्
क्यापसहित केटीहरूले यसलाई इन्टरनेटमा ठुलो बनाउँदैछन्! के तपाईंले लोकप्रिय 'सौन्दर्य' केटीहरूको बारेमा सुन्नुभयो? पढ्नुहोस् र २०२० मा इन्टरनेट फेसन प्रवृत्तिको बारेमा अधिक पत्ता लगाउनुहोस्।
हामीले केहि कम्पाइल गरेका छौं टोपी हलिउडमा सब भन्दा प्रख्यात के तपाई उनीहरूलाई चिन्न सक्नुहुन्छ? हामीसँग सिनेमाको सर्वश्रेष्ठ पलहरू पल्टाउनुहोस् जहाँ सही पात्रहरू थिए टोपी!
बेसबल क्याप: तपाईं कसरी खेलकुदबाट शहरी संस्कृतिको एक महत्त्वपूर्ण भाग हुन जान गर्नुभयो?
हामी बेसबल टोपी पछाडिको महान कथाको लागि बाटो दिन्छौं, "बेसबल टोपी" वा "बेसबल टोपी" को रूपमा पनि चिनिन्छ, एक सहायक जुन खेलकुदको क्लासिक भएको छ, तर कपडाको लेख अझै धेरै वर्तमान आजकल।
ट्रक क्याप्स यो गर्मी को फैशनेबल क्याप
शब्द "ट्र्याकर" टोपी वा "ट्रक" टोपी व्यापक रूपमा बहस गरीएको छ र इतिहास भर लोकप्रिय छ। को ट्रक टोपी तिनीहरू आफैंको लुगा सूर्यको किरणबाट टाउको र आँखालाई बचाउन डिजाइन गरिएको हो, तर वर्षौंको अवधिमा यो एक प्रतिष्ठित फ्यासन सहायक भएको छ।